एजेन्सी । बाल्यकालमा सबैले कुनै न कुनै प्रकारको उट्पट्याङ काम गरेका हुन्छन् । जसमा कसैको घरमा गएर घण्टी बजाउँदै भाग्नु पनि पर्न सक्छ । तर के तपाईलाई थाहा छ ? यस्तो कार्य गरेमा पक्राउ पनि पर्न सकिनेछ ।
खासगरी भारतको मुम्बईमा एक ३७ वर्षीय व्यक्तिलाई यसप्रकारको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ की उनी मध्यरातमा घर–घरमा जाँदै घण्टी बजाएर भाग्ने गर्दथे । व्यक्तिको यसप्रकारको बानीले मानिसहरु हैरान परेका थिए ।
एकदिन ती व्यक्ति जब एक गहना पसलको घरको घण्टी बजाएर भाग्दै गरेका थिए तब त्यहाँका आसपासका मानिसहरुले उनलाई समाते । त्यसपछि उनलाई सोधियो की किन यस्तो कार्य गर्छौ ? तब उनी केही बोलेनन् ।
उल्टै मानिसहरुलाई गाली गर्न थाले । त्यसपछि मानिसहरु प्रहरी बोलाएर जिम्मा लगाइदिए । प्रहरीका अनुसार ती व्यक्तिको यस्तो बानी रहेको थियो की सुतिरहेको मानिसलाई दुख दिने । ती व्यक्तिले मद्यपान पनि गरेका थिए । प्रहरीले उनलाई आइपीसीको धारा ४४८,५०४ र ५०६ अनुसार पक्राउ गरेको हो ।
घण्टी बजाएर भाग्ने